AIZA NO ALEHA : Karibotel – Analakely -
AccueilVaovao SamihafaAIZA NO ALEHA : Karibotel – Analakely
30/06/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Mpanakanto roa samy manana ny tontolo misy azy nefa atambatry ny zava-kanto. Hiara hiaka- tsehatra etsy amin’ny Karibotel Analakely i Mbola Talenta sy Poon anio amin’ny 8 ora sy sasany alina. Raha any amin’ny tontolon’ny fitendrena gitara amin’ny gadona samihafa no nahafantarana an’i Mbola Talenta, dia any amin’ ny sehatry ny hira madinika sy amin’ny fanafanana lanonana kosa no misy an’i Poon. Io fahasamihafana io no hosedrain’izy mirahalahy amin’io « Feo sy Gilita » io. Ankoatra ny fitendrena gitara dia sady hitondra ny feo amin’ny hira i Mbola Talenta. Toy izany koa i Poon izay haneho ny talentany ihany koa amin’ny fikapohana ampongalava, hitendry kabôsy sy gitara ary hitsoka sodina. Tafiditra ao anatin’ny fandaharan-kiran’izy mirahalahy ireo bà gasy, kalon’ny fahiny, ny folk song ary ireo hiran’ny taona 70 sy 80. Hifangaro amin’ireo ny hira vahiny sy ireo malaza amin’izao fotoana. Hanotrona azy mirahalahy amin’io takariva io i Lepa eo amin’ny fitendrena ny gitara beso.
Hanjaka indray ny gitara ao anatin’ilay hetsika « Gasikara soul cabaret » hiarahana amin’ny Soulanga. Seho hotanterahina etsy amin’ny Piment Café Behoririka anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Ireo andrarezin’ny fitendrena gitara sy ny feo no hiara-dia amin’izany. Handray anjara amin’ity seho ity ry Nini Kolibera, Jovin ary Kiady. Hivelatra amin’ny karazan-kira sy karazana gadon maro ny seho atolotr’izy ireo nefa amin’ny endrika miavaka sy asongadin’ny gitara.
« Ndao hihira », io no lohatenin’ny hetsika atolotry ny Trass Tsiadana ho an’ireo mpankafy mozika anio alina. Misokatra ho an’ny rehetra manan-talenta sy liana amin’ny mozika ny sehatra, ary hiaraka azy ireo amin’ny mozika sy amin’ny fanentanana i Orad Manalina. Mivelatra amin’ny karazan-kira rehetra araka ny fangatahan’ny mpihira ny seho na hira malagasy na hira vahiny.
Mpanakanto tanora anisan’ireo manana ny lazany amin’izao fotoana. Hampangotraka ny ranomandry etsy amin’ny Le Glacier Analakely anio alina i Alson. Takariva hitondrany indray ireo hirany mampandihy sy mampientanentana amin’izao andro mangatsiaka izao. Nahafantarana an’i Alson ny fitrandrahana ireo gadona afrika sy ny fampiarahana izany amin’ny gadon’ny hira an-drenivohitra toy ny « African moov », « Maman’i Liva »…
Café de la Gare – Soarano
Ny tontolon’ny jazz indray no atolotry ny Café de la Gare etsy Soarano anio takariva manomboka amin’ny 7 ora. «Jazz duet » hiarahana amin’i Sandrine Rajaofetra eo amin’ny hira ary hanotrona azy kosa i Benkheli Ratri eo amin’ny fitendrena gitara. Efa zatra mampiaraka talenta izy mianadahy ireto ary anisan’ny hokaloiny amin’izany ireo hira malagasy toy ny « Matokia » (Lalao Rabeson), « Mivolombatosoa »… Tsy ferana ihany koa anefa ireo hira vahiny.
Ao anatin’ny fampahafantarana sy fanomezana hatrany sehatra ho an’ireo mpanakanto mivoy ny gadona mafana, nasain’ny Jao’s Pub Ambohipo hanafana ny sehatra indray anio i Khaleba. Mpanakanto fantatra amin’ny fitrandrahana gadona samihafa ary nantao indrindra hampahafantarana ny hiaka farany tamin’ity taona ity « Vibrez les mains » izay lohatenin’ny fampisehoana. Ho entiny an-tsehatra ihany koa anefa ireo hira taloha toy ny « Molia », « Magneny »…
Cercle Franco-Malgache – Anosy
Toerana mbola tsy nandalovany hatramin’izay no hitondran’i Samoëla indray ny talentany anio alina manomboka amin’ny 8 ora. Fotoana hitondran’ity mpanakanto fantatra eo amin’ny vazo miteny ity ireo hira nisongadina tamin’ireo rakikira efa navoakany. Na izany aza, misy ireo hira tgsy azony hialana ary angatahan’ireo mpankafy hatrany rehefa seho takariva toy izao raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Ho any amin’i Piso », « Taraiky », « Rava »…
Dôma – Ankorondrano
Anisan’ireo mateti-pihavy amin’ny fampisehoana eo amin’ny rock Mavesatra i Rheg. Ny Sabotsy 01 jolay izao indray no manome fotoana ireo mpankafy io gadona io ity mpanakanto ity amin’ilay fampisehoana fampahafantarana ny rakikira vaovao « Ammorheg ». Anisan’ireo hira nahafantarana ny tarika mbola entiny hanafana ny sehatry ny Dôme ny « Raozy », « Mahasahisahy »…